Taxanaha 460SL Swinging Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Taxanaha 460SL Swinging Dragon® Dredge
460SL Swinging Dragon® dredge waxay ku habboon tahay deegaanka, marin biyoodka cidhiidhiga ah, iyo mashaariicda qoditaanka harada. Cutubkani wuxuu bixiyaa kala duwanaansho gaar ah oo awood u leh inuu u shaqeeyo sidii jaranjaro jaranjarooyin ah oo loogu talagalay hawlgalka kanaallada cidhiidhiga ah ama sida hoos u dhaca caadiga ah marka loo baahdo ballaadhin ballaadhan. Habka jaranjarada lulid, hawlwadeenku wuxuu u hagaajin karaa madaxa jarista goynta saxda ah iyo wax soo saarka ugu fiican.
Habka sallaan lulataa wuxuu u oggolaanayaa isticmaalka marinnada cidhiidhiga ah waxayna tirtiraysaa baahida loo qabo fiilooyinka iyo barroosinka.
Si fudud loo soo uruuriyay iyadoo la adeegsanayo qalabka gacanta caadiga ah iyo wiishashka badda.
Qalabka markabku ku dhexjiro oo ku dhexjira ayaa si dhakhso leh oo sax ah u sii wadaa qulqulka.
Qiyaasta dheecaanka: 12 ″ x 12 ″ (300 mm x 300 mm)
Mashruuca Matooraha Main Caterpillar C-15: 540 HP (402 kW)
Awoodda Quwada - Quwada: 50 HP (37 kW)
Qoto Dheerida Ugu Badan: 20 ′ (6 m)
Wiishka wiishka ku shaqeeya.
Naqshadeynta dhaqdhaqaaqa iyo calaamadaha.
Wiishka jibbada ah ee 'Stern jib crane' ee tuubada dheecaanku ka baxo.
Kuleyliyaha qolka kululeeyaha iyo qaboojiyaha.
Fursado dheeraad ah ayaa sidoo kale la heli karaa markii la codsado.